အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အရက်သောက်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အရက်သောက်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ ?
အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အရက်သောက်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ ?
Posted by Shwe Ei on Apr 30, 2013 in Relationships & Family, Society & Lifestyle | 22 comments
အရွယ်ေရောက်ပြီးသူ အများစုက အတိုင်းအတာတခုထိ အရက်သောက်နိုင်ကြပါတယ်-
အမျိုးသားတွေက တနေ့ နှစ်ကြိမ်၊ အမျိုးသမီးတွေ နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေက တနေ့ တကြိမ်- ပြီးတော့ အရက်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာတွေကိုလဲ ရှောင်နိုင်ကြတယ်။
(အရက်တကြိမ်သောက်သုံးခြင်းဟာ ၁၂အောင်စရှိတဲ့ ဘီယာ သို့မဟုတ် ဝိုင်ပုလင်း ၊ ၅ အောင်စရှိတဲ့ ဝိုင်တဖန်ခွက် သို့မဟုတ် ၁.၅ အောင်စရှိတဲ့ ပေါင်းခံထားသော အရက်ပြင်း (သို့) ဝီစကီ သတ်မှတ်ချက်အဆင့် ၈ဝနဲ့ ညီမျှတယ်လို့ဆိုပါတယ်)။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် လုံးဝအရက်မသောက်သင့်တဲ့ လူမျိုးလဲရှိနေပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ၊ ခလေးယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့သတိရှိမှုကိုအသုံးချပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မျိုးမှာ ပါဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ (သို့မဟုတ်) လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ယာဉ်မောင်း တွေ၊ ဆေးစာမပါဘဲ ဝယ်လို့မရတဲ့ ဆေးမျိုးကို အတိအကျလိုက်နာ သောက်သုံးနေရပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ လူနာတွေ၊ အရက်သောက်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါပိုတိုးလာစေနိုင်တဲ့ လူနာမျိုးတွေ ၊ အရက်ဖြတ်ထားစလူနာတွေ ပြီးတော့ အသက် ၂၁ အောက် အရွယ်လူငယ်တွေပါဘဲ။
စိတ်ကုဆရာဝန် Dr.Ingrid Mathieu ကအရက်စွဲခြင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ အခုလိုဖြေကြားပေးထားပါတယ်။
အရက်စွဲခြင်းဆိုသည်မှာ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ရွေ့ ထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခြင်း ၊ မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း စသည့် ပြသနာများပါဝင်သော ယေဘူယျ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်အသင်းက (၁၉၆၅) ခုနှစ်မှာ၊ အမေရိကန်ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့က (၁၉၆၆) ခုနှစ်မှာ အရက်စွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) အရက်မသောက်မရမနေနိုင်ဖြစ်ခြင်းကို ရောဂါတခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ စွဲလမ်းမှုနဲ့ဆိုင်သော ရောဂါပုံစံအပေါ် အခြေခံပြီး အရက်စွဲခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ် စိတ် နှင့် အရက်သောက်လိုသောဆန္ဒ အပေါ် စဉ်ဆက်မပြတ်အကျိုးသက်ရောက်နေသော နာတာရှည်ရောဂါတခုဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားသည်။
အရက်စွဲခြင်းဟာ မိမိဘဝကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ ?
အရက်စွဲခြင်းဟာ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားချို့တဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အားနည်းခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အခြားရောဂါတွေလိုဘဲ ကြိုပြောလို့ရတဲ့ အကျိုးဆက်ရှိတယ်။ နိမိတ်ပြ ရောဂါက္ခဏာတွေ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ မျိုးရိုးဗီဇ နဲ့ လူမှုဘဝ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးခြင်းကိုလဲခံရတာနဲ့လဲ ဆိုင်ပါတယ်။
အရက်စွဲခြင်းဟာ ကျား၊မ မရွေး မည်သည့်အသက်အရွယ် ၊ မည်သည့် လူမျိုး မဆို နှေးနှေးဖြစ်စေ မြန်မြန်ဖြစ်စေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ခန့်မှန်းခြေ သန်း(၁၄၀) ခန့်ဟာ အရက်စွဲနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရက်မသောက်ရ မနေနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ?
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူမမှန်ခြင်းအတွက် ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ခြင်းနဲ့ အချက်အလက်စုဆောင်းတင်ပြခြင်း ဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်မှာ ပါတဲ့ အကျဉ်းချုပ်ဖေါ်ပြချက်အရ အရက်စွဲခြင်းကို အောက်ပါတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖေါ်ပြထားတဲ့ နိမိတ်ပြလက္ခဏာတွေထဲက သုံးခု သို့မဟုတ် သုံးခုထက်ပိုတဲ့ အခြအနေမျိုး ၁၂လအတွင်းမှာ အချိန်မရွေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်တဲ့ အသုံးချမှုပုံစံတစ်ခု ဟာ ဆေးကုသတဲ့နေရာမှာ သိသိသာသာ ပိုဆိုးသွားစေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်စေတဲ့ အခြအနေတခုကို ဦးတည်နေပါပြီ။
•	သည်းခံနိုင်မှု- တူညီတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု တခုရဖို့အတွက် သောက်နေကျထက် ပိုသောက်ရတာမျိုး
•	နှုတ်ထွက်ခြင်း – အန်ချင်သလိုဖြစ်တာ၊ လက်တုန်တာ၊ ချွေးထွက်တာ သို့မဟုတ် အိပ်မပျော်တာ စတဲ့ဝေဒနာတွေကို အရက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ သို့မဟုတ် လုံးဝဖြတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ ခံစားရတာမျိုး
•	သောက်နေကျထက်ပိုသောက်မိတာဟာ တကူးတကန့်ရည်ရွယ်တာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်သလို၊ ရည်ရွယ်ချက်မထားခင် အချိန်အတော်ကြာကထဲက လုပ်မိနေတာမျိုး
•	လုံးဝမသောက်ဘဲနေတာ ဒါမှမဟုတ် ရုတ်တရက်ဖြတ်ချလိုက်ဖို့ ကြိုးစားပြီး မအောင်မြင်တာမျိုး
•	အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကနေ ပြန်လည် နလံထူနိုင်ဖို့ အချိန်ယူလွန်းတာမျိုး
•	အရက်သောက်နေတာကြောင့် အားလပ်ချိန်မှာလုပ်ရမဲ့အသင်းအဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ၊ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေ ၊ အရေးကြီးတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပွဲတွေကို အချိန်မပေးနိုင်တော့တာမျိုး
•	အရက်ကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေဖြစ်တဲ့ စိတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်တွင်းကလီစာများ ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်နေစေတာတောင်မှ ဆက်သောက်နေမိတာမျိုး
အရက်စွဲသူတွေဟာ လတ်တလောဆေးကုသမှုခံယူနေတာမျိုး မဟုတ်ရင်တောင်မှ အရက်စွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကနေ ပြန်လည်နလံထူဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရက်မသောက်ရမနေနိုင်သူတွေကျတော့ မိမိရဲ့ အပြုအမူတွေ သဘောထားအမြင်တွေကို ပြောင်းလဲယူဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းမှာ မိမိကိုယ်ကို စည်းကျပ်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းရှာရတာမျိုးအထိ တဘဝလုံးစာ ပြုပြင်ယူရပါတယ်။
ပြုစုတဲ့နည်းတွေကတော့Detox လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားနည်းတွေ ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အစီအစဉ်တွေ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကူညီရာရောက်တဲ့ Alcholics Anonymous (အမည်မသိ အရက်စွဲသူ) စတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာ ပါဝင်တာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့ ဘီယာ (၄)ခွက်ထက် ပိုသောက်ပါက ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်
တစ်နေ့လျှင် ဘီယာ(၄)ခွက်ထက် ပိုမိုသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အသည်းပျက်စီးမှုနူန်း မြန်ဆန်ကာ ကင်ဆာရောဂါကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးများထံက သိရှိရသည်။ “နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဘီယာသောက်သုံးတာ များလာတယ်ဆိုရင် ဘီယာထဲမှာပါတဲ့ အရက်ပမာဏက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက် နိုင်တယ်။ အရက်ပါတယ်ဆိုမှတော့ အသည်းကို ထိခိုက် မယ်၊ ပြီးရင် ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အတွက် ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသွား တယ်။”ဟု အလုံမြို့နယ် ဝင်းဆေးခန်းမှ အထွေထွေရောဂါကု ဒေါက်တာမြင့်ဦးက ပြောသည်။ ဘီယာသည် ဘာလီစေ့အား ကစော် ဖောက်ထားသည့် အရက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းထဲတွင် ပါဝင်သောအရက်ပမာဏသည်(၄)ရာခိုင်နူန်းမှ(၁၂)ရာခိုင်နူန်းအထိ
ဖော့စဖောရပ်စ်၊ ဘိုင်အိုတင်နှင့် ဘီတာမင်ဓါတ်များပါဝင်ကြောင်း ဆရာဝန်ကြီး များက ဆိုသည်။ ဘီယာတွင် အရက်ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် အသည်းအား ရောင်ယမ်းခြင်း၊ အစာအိမ်အား ရောင်ယမ်း စေခြင်း၊ ပန်ကရိယအား ရောင်ယမ်းစေခြင်း၊ဆီးချိုရောဂါများနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများဖြစ်ပေါ် နိုင်ကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။ “ကျွန်တော် အရင်ကဆို တစ်နေ့ကို (၃)ခွက်လောက် ပုံမှန်သောက်ဖြစ်တယ်။ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ဗိုက်ကနည်းနည်း ထွက်လာတယ်။ နေရထိုင်ရလည်း အဆင်မပြေဘူး။ ဟိုရောဂါဖြစ် ဒီ ရောဂါဖြစ်ဖြစ်လာတော့ ဖြတ်လိုက်တယ်။ အခုဆို ဘီယာရဲ့ဆိုးကျိုးလားမသိဘူး ဆီးချိုရောဂါနဲ့ အစာအိမ်တော့ ကိုယ်တွေ့ကြုံလာခဲ့ရတယ်”ဟု ဒဂုံမြိုသစ်မြောက်ပိုင်းမှ ကိုတုံက ပြောသည်။ ဘီယာသောက်သုံးမှုများလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တက်သော ဗိုက်ဆူ (ဘီယာဗိုက်)လာသည့် လက္ခဏာသည် ဘီယာကို မြုံ့သောက်ရင်းဖြင့် အစားများစွာ စားမိခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အဆီဓါတ်များသည် ဗိုက်ပတ်လည်တွင် စုစည်းကာ အဝလွန်ကဲလာခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းကတစ်ဆင့် အခြား ရောဂါများသို့ပိုမိုကူးစပ်လွယ်ကူနိုင်ခြင်းကြောင့်
သောက်သုံးသူများအနေဖြင့် ဂရုပြုဆင်ခြင် သောက်သုံးသင့်ကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးများက အကြံပြုပြောကြားသည်။ ဘီယာသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရေပမ်းအစားဆုံး ယမကာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ဂါလံပေါင်း (၃၅)ဘီလီယံ ကျော် ရောင်းချနေ ရကြောင်း ကိုလည်း ဆရာဝန်များမှ ကောက်ယူထားသော စစ်တမ်းများအရ သိရှိ ရပြီး လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ အမျိုးသားများပါမက အမျိုးသမီးများပါ သောက်သုံးမှုများလာသည်။
Credit – ယမင်း(မြစ်မခ)
မသောက်ရသေးရင် လက်တုန်ဘာတုန်ဖစ်ပီဆို စွဲလမ်းခြင်းပြဿနာ..ပေါ့နော်
အချိန်တန်.. သေကြရမယ့်လောကမှာ..နေသူတိုင်း.. အသိဉာဏ်မှီရင်.. သဘာဝကပေးတဲ့..အခွင့်အရေးတခု.. မလွတ်ကြစေချင်..
တရက်.. တခွက်.. ချင့်ချိန်သောက်ပါ…။
အစိုးရကလည်း.. ကောက်တတ်ရင်.. အခွန်ငွေများစွာရပြီး..အဲဒီငွေကို.. ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမှာ သုံးနိုင်ပါကြောင်း..
Beer Belly Myth: Study Claims That Beer Isn’t Tied To Weight Gain, Has Health Benefits
The Huffington Post | By Rachel Tepper	Posted: 02/15/2013 10:52 am EST
စ သောက်ကာစမှာတော့ လူက အရက်ကို နိုင်တာပဲ။
သောက်ရင်းနဲ့ အရက်က လူကိုနိုင်သွားပြီး ဘဝရှုံးတော့တာပဲ။
ဒ့ါကြောင့် မ စ ဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ :buu:
တူမတွေကို အရက်သောက်ဖို့ခွင့်ပေးလိုက်ပါ အမတော်ရယ်..။ အနည်းဆုံးတော့.. အသားအရေလှတယ်တဲ့..။
Drinking Wine for Anti-Aging: Benefits of Resveratrol – WebMD
WebMD talks with Richard Baxter, MD, about the benefits of wine for health and … In wine, the skin and seeds are part of the fermenting process, but both are …
How can drinking red wine help keep my skin healthy? – Sharecare
Some new studies suggest that trans-resveratrol,anatural compound found in the skin of red grapes (and in red wine)…Learn more from our experts about …
Vinotherapy: Wine-derived products claim healthy skin benefits …
An innumerable number of studies tend to agree thataglass of wine now and again has good benefits for your …
More videos for wine skin health »
Oct 18, 2012 – Related Articles. Health Benefits of Red Wine Exaggerated. Reuters. Grape Skin. Gale Encyclopedia of Alternative Medicine. Related Topics …
ဒီစာလေးဘယ်လိုကနေ စရေးဖြစ်တယ်လို ့တော့ စိတ်ဝင်စားမိသားရယ်…….
အရက်အကြောင်း ဖတ်မိတာလည်း နည်းဖူးရယ်……….
ခြုံကြည့်ရင်တော့ အရက်စွဲခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားထဲမှာ အကြီးဆုံးကတော့ ဆင်ခြေလို ့ထင်ပါတယ်……
အပေါင်းအသင်းကြောင့်မို ့…. ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်မို ့… ရာသီဥတုကြောင့်မို ့…..
သဂျီးပြောတဲ့ တနေ ့တခွက်ကိုတော့ ကြိုက်သဗျို ့….
သို ့ပေသိကား ဗုဒ္ဒဘာသာ ဖြစ်လာလျှင် သူရာမေရာယ ရှောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကြီးက ရှိနေတော့…..
တခါတလေ အရက်သောက်မိရင် စိတ်မသန် ့ဖူးရယ်………….
သောက်နေချိန်တော့ ဟုတ်ဖူး… သောက်ပြီးမှ…
နေ ့တိုင်းလဲ သောက်ဝူး…. လုံးလုံး မသောက်ပဲလည်း မနေဖူး…. အလွန်လည်း သောက်ဝူး…..
သင့်တော်တဲ့ အချိန်မှာ သင့်တော်သလို သောက်သာသည်လျှင် အကောင်းဆုံးလို့ထင်ကြောင်း……
ဘယ်လိုရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားရင် Tag ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်…
ဆိုတော့ သများလိုဘဲ စိတ်ဝင်စားကြသူ မည်သူမဆို ဖတ်မိ မှတ်မိပြီး
ဗဟုသုတရစေခြင်း အလို့ငှာ တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တာကတော့ ကိုယ့်လစ်မစ်ကိုသိ လို့ဘဲပြောပရဇီ
စိန်ဝင်းထွန်းဆိုတာ အဆိုတော် မှုတ်ဖူးလားအေ ?
အော် ဂလိုလား… အိုက်လူရီး သချင်းတေ ရှာဖွေပီးနားထောင်ကျိအူးမှဘာတော်
“……… သေသောက်တိုင်းသာ ပျက်စီးပါမူ ဘယ်မှာလူကောင်း ရှိမည်နည်း။ ” ဆိုလား.. အဲ့ ကဗျာ အပိတ်လေးကို သဘောကျဒယ်။ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ။ :hee:
အရက်သောက်သူတိုင်း ပျက်စီးတယ်လို့ မ မှတ်ပါဝူး။ အိုက်ဂလိုသာဆိုရင် ရွာထဲမှာ
အရက်သမား သက်မဂ တောင်ပေါ်လာစရာမရှိတော့ဝူးလေ
မကြည်ပြာဆိုလို့ဘယ်သူများလဲလို ့ကွယ်
မဝင်တာကြာတော ့မျက်စိတွေလည်လို ့
မသောက်လည်းမူး သောက်လည်းမူး မထူးတော ့ပြီမို ့
ကဲ …. နောက်တခါ မသောက်တော ့ဘူးဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်ဆာ သများကတော့ မသောက်လဲမူး သောက်လဲမူး မထူးတော့ပြီမို့
မမပြာ သများကတော့ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အရက်သောက်ခြင်းဆိုတာကို … အတော်မူးအောင် သောက်ခြင်းလို့ပဲ အဒိတ်ဗယ်ဖွင့်ချင်ပါတယ် …. ။ ဝုတ်ဒယ်လေ … လူမှန်းမသိအောင်မူးနေလျှင် ပွစိပွစိနားငြီးအောင်လည်း မရစ်တော့ဘူး … ၊ ဟိုလျှောက်ဒီလျှာက်နဲ့ ညက်စိနောက်အောင်လည်း မသွားဒေါ့ဗဲ … ကွေးကွေးလေးအိပ်နေဒါကို ချိုလို ဘာဒယ် … ။ ဘယ်မှ မတွားတော့ အန်ဒရယ်ကင်းဒါပေါ့စ်အေ …
အိုက်တသိန်း …. ထုတ်မရသေးဘူး….. လောလောဆယ် အကောက်ခွံကလိုက်နေလို့ … မထုတ်သေးဘဲ ထားထားတယ် … ခိခိ … မမပြာအထုသောက်မယ်ဆိုယဲ တိုက်ဘာဒယ် … အရက်2 ပုံး ချိတယ် … ဟီး (အရက်ပျံ)
မသောက်တော့ဘူး မသောက်တော့ဘူးနဲ ့
မသောက်စေချင်လို့ ပို့စ်တင်ထားတာကို သောက်မယ့်ကြောင်းတွေပဲပြောနေကြတယ်။
ဘာတဲ့… ပြောလေ ကဲလေ မန်းလေ ပြဲလေ ဆိုလား … ခိခိ